बिस बोसको घरबाट आयो दुखद खबर : २४ वर्षे पिस्ताको दुर्घटनामा परेर निधन ! – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /हलिवूड/बलिवूड/बिस बोसको घरबाट आयो दुखद खबर : २४ वर्षे पिस्ताको दुर्घटनामा परेर निधन !
टिभीमा निकै चर्चित कार्यक्रम हो, बिग बोस । नेपालमा पनि यसका फलोअर्स कम छैनन् ।टेलिभिजन रियालिटी शो ‘बिग बोस’को घरमा हरेक वर्ष केही न केही नयाँ कुरा हेर्न पाइन्छ । शोको प्याटर्नदेखि लिएर प्रतिष्पर्धीको चुनावसम्म सबैकुरा यसमा बद्लिन्छ ।यो घरमा सबै क्षेत्रका स्टारको उपस्थिति पनि दमदार देखिएको छ । अलग अलग सिजनमा देखिएका यी स्टारले आफ्नो अभिनयबाट मात्र नभई सुन्दरताका कारण पनि सबैको मन जितेका छन् ।
आज यही बिग बोसको घर शोकमा डुबेको छ । बिस बोस १४ मा ट्यालेन्ट म्यानेजरको रुपमा रहेकी पिस्ता धाकडको निधन भएको छ । भारतीय टेलिभिजन रियालिटी शो बिग बोसको सेटकै अगाडि भएको दुर्घटनामा बिग बोसकी ट्यालेन्ट म्यानेजर पिस्ता धाकडको मृत्यु भएको हो । शुक्रबार राती सलमान खानसँग विकेण्ड का वार सुटिङ सकेर एक्टिभा स्कुटरमा घर जान लाग्दा पिस्ता दुर्घटनामा परेकी हुन् । अँध्यारोका कारण पिस्ता सवार स्कुटर चिप्लिएको थियो ।
सडकमा भएको खाल्डोमा परेर स्कुटर ढलेपछि स्कुटरबाट लडेकी पिस्ता सडकमा थिइन् । त्यही बेला त्यहाँ एउटा भ्यानिटी भ्यान आउँदै थियो जसले पिस्तालाई किचेर अगाडि बढ्यो । चर्चित प्रोडक्सन हाउस एण्डेमोल इण्डियाकी कर्मचारी पिस्ताले द भ्वाइस, बिग बोस, खतरों के खिलाडी जस्ता चर्चित रियालिटी शोमा काम गरेकी थिइन् । उनको अचानक मृत्युले बलिउड शोकमा छ ।उनको निधनमा सलमान खान तथा पुरै परिवार दुखि भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले बताएका छन् ।
फेसनको चक्करमा प्रियंकाले लगाइन् जालिदार स्कर्ट, तर ‘भित्री वस्त्र’ देखिएपछि… (फोटोफिचर)